» इन्टरनेटको प्रयोगले लाग्ने गम्भीर मानसिक रोगहरु, कतै तपाईलाई पनि यो रोग लागेको छ कि ?
९ बैशाख २०७५, आईतवार ००:५१
सेल्फी धेरै खिच्नेलाई सेल्फाइटिस रोग
सन् २०१४ मा यसको शुरुवात अनलाइन जोक (मजाक)को रुपमा भएको थियो । जब अमेरिकन साइकोट्रिक एसोसिएसनले सेल्फाइटिसलाई नयाँ मानसिक रोग भनेको थियो । यो रोगबाट त्यस्ता व्यक्ति पीडित हुन्छन्, जो बढी सेल्फी खिच्छन् र सामाजिक सञ्चालमा पोस्ट गर्छन् । सन् २०१७ मा यो वास्तवमै रोग भएको प्रमाणित भइसकेको छ ।
फेन्टम रिङ्गिङ सिन्ड्रोम
के तपाईंलाई पटक पटक यस्तो लाग्छ कि तपाईंको फोन बजिरहेको छ । र जब तपाईं आफ्नो फोन नजिक जानुहुन्छ त पत्ता लाग्छ कि फोन बजिरहेकै छैन । यस्तोमा मानिसहरु आफ्नो भ्रम मानेर नजरअन्दाज गरिदिन्छन् । तर यो एक मानसिक समस्याको संकेत हो । यो रोगको नाम ‘फेन्टम रिङ्गिङ सिन्ड्रोम’ हो । यसलाई गम्भीर रोगकै रुपमा त लिइँदैन । तर समयमै उपचार नगरे यसले गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्ने चिकित्सकहरुको भनाइ छ । अनुसन्धानकर्ताहरुले आवश्यकताभन्दा बढी समय मोबाइल चलाउने व्यक्तिमा यस्तो रोगको लक्षण देखिने गरेको पत्ता लगाएका छन् ।
गुगल इफेक्ट : सोच्ने क्षमताको विनास
मानिसको सामान्य जीवनमा पनि सर्च इन्जिनले अहिले ठूलै प्रभाव पारेको छ । खास गरेर मानिसहरु गुगलप्रति आवश्यकताभन्दा बढी निर्भर भइरहेका छन् । मानिस आफ्नो दैनिक जीवनका हरेक जानकारी हासिल गर्न गुगल सर्च गर्ने गर्छन् । जसले गर्दा मानिसको सोच्ने क्षमतामा ह्रास आउँदै गएको अनुसन्धानकर्ताले पत्ता लगाएका छन् । एक अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ कि आवश्यकताभन्दा बढी गुगल प्रयोग गर्ने मानिसको सोच्ने क्षमतामा १० प्रतिशतले ह्रास आएको छ । साथै मानिसको याद राख्ने क्षमतामा पनि गम्भीर असर परेको खोजबाट पत्ता लागेको छ ।
Source : :myofficemagazine.co.za
मोबाइल हराउने डर : नोमोफोबिया
मोबाइल फोन प्रयोग गर्ने व्यक्तिमा एक अर्को रोग देखा परेको छ, नोमोफोबिया । यो एक मानसिक रोग हो । यस्तो रोग लागेका व्यक्तिलाई हरेकपल्ट आफ्नो फोन हराउने पो हो कि ? भन्ने चिन्ता हुन्छ । साथै कसैले आफ्नो फोन चोरी पो हाल्यो कि भनेर खल्ती चेक गर्ने गर्छन् । यदि तपाईं दिनमा ३० पटकभन्दा बढी पल्ट आफ्नो फोन चेक गर्नुहुन्छ भने तपाईंलाई यो रोग लागेको छ । एक अध्ययनअनुसार स्मार्टफोन प्रयोग गर्नेमध्ये ६६ प्रतिशत मानिसहरु यो रोगबाट पीडित छन् ।
बिरामी हुने भ्रम : साइबरकान्ड्रिया
इन्टरनेटमा कुनै रोगको लक्षण पढेर आफूलाई पनि त्यही रोग लागेको सोच्ने प्रवृत्तिलाई साइबरकान्ड्रिया भनिन्छ । यस्तो स्थितिमा मानिसहरु मेडिकल जानकारी बिना नै आफूलाई रोगी सम्झछन् र यसले ठूलो मानसिक समस्या निम्त्याउनसक्ने अनुसन्धानकर्ताहरुको भनाइ छ ।